GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Otú e si kpọwa ya Ista: Akwụkwọ a na-akpọ Encyclopædia Britannica sịrị: “ O nweghị onye ji n’aka ebe ndị Bekee si nweta aha a bụ́ Ista. Otu ụkọchukwu aha ya bụ Venerable Bede sịrị na ọ ga-abụ na e si n’aha chi nwaanyị a na-akpọ Istra nweta ya. ” Ndị ọzọ na-ekwukwa na e si n’aha chi nwaanyị ndị Finishia a na-akpọ Astati nweta ya. Ha kweere na ọ bụ chi a na-enye nwa, na-emekwa ka ihe ha kọrọ n’ubi mee nke ọma. Ndị Babịlọn na-akpọ chi a Ishta.
Oké bekee e ji agba Ista: A na-ewere ya na oké bekee na-anọchi anya ọmụmụ. Akwụkwọ a na-akpọ Encyclopædia Britannica kwuru na ‘ ebe ndị oge a si mụta iji oké bekee eme ememme Ista bụ n’aka ndị na-ekpeburu arụsị na Yurop na Ijipt na obodo ndị gbara ya gburugburu. ’
Àkwá e ji agba Ista: Akwụkwọ a na-akpọ Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, kwuru na egwuregwu ụmụaka na-egwu, ya bụ, ịchọta àkwá Ista ndị e zoro ezo “ abụghị egwuregwu nkịtị, kama na ọ bụ ihe a na-eme n’ememme ndị ọgọ mmụọ oge ochie. ” Akwụkwọ ọzọ a na-akpọ Traditional Festivals kwuru na obodo ụfọdụ kweere na àkwá Ista ndị a chọrọ mma “ nwere ike ime ka mmadụ nwewe obi ụtọ, ihe agawara onye ahụ nke ọma, ahụ́ esie ya ike, ihe ọjọọ agharakwa ime ya. ”
Efe ọhụrụ a na-eyi n’oge Ista: Akwụkwọ a na-akpọ The Giant Book of Superstitions kwuru, sị: “ E weere ya na mmadụ iyi efe ochie emere chi nwaanyị ndị Skandinevia a na-akpọ Istra ememme bụ mkparị, nakwa na o nwere ike ime ka ihe ọjọọ mee onye ahụ. ”
Akwụkwọ a na-akpọ The American Book of Days kwuru hoo haa otú Ista si bido. Ọ sịrị: “ O doro ewu na ọkụkọ anya na ndị mbụ kpere chọọchị webatara ememme ndị ọgọ mmụọ na chọọchị, mezie ya ka o yie ememme Ndị Kraịst. ”
Baịbụl sịrị ka anyị ghara ịnwa anwa jiri omenala ndị Chineke kpọrọ asị na-efe ya. (Mak 7:6-8) 2 Ndị Kọrịnt 6:17 kwuru, sị, “‘ Kewapụnụ onwe unu,’ ka Jehova sịrị, ‘kwụsịkwanụ imetụ ihe na-adịghị ọcha aka.’ ” Ememme Ista bụ ememme ndị ọgọ mmụọ. N’ihi ya, ndị niile chọrọ ime ihe Chineke na-achọ ekwesịghị ịna-eme ya.